Iyo iPhone 7 kamera girazi isafiri | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 kamera girazi isafiri
Kubva kuvhurwa kweiyo iPhone 7, zvakawanda zvakataurwa nezve girazi rinodzivirira iyo lens yekamera yechigadzirwa, pamwe negirazi rebhatani repamba riri pasi pechinzwa cheminwe. Mimwe miedzo yekupikisa yakaitwa nevanhu vakasiyana uye yakaiswa kuYouTube yakadenha zvakatemwa neApple neku "kuratidza" kuti havasvike padanho rekurwisa izvo zvinhu zvakaita sesafire, uye vazhinji vauya kuzovimbisa kuti Apple haina kushandisa chinyorwa ichi, ichinyepera vatengi vayo, kana kuti yaishandisa sapphire yemhando yepamusoro uye ndosaka isina kuramba sezvayaifanira. Nekudaro, vhidhiyo nyowani inoratidza kuti zvirokwazvo isafire, kunyange kuongorora kuumbwa kwekristaro murabhoritari, uye kunyangwe Apple yakaburitsa chirevo chepamutemo. Zvese ruzivo pazasi.
Vhidhiyo iri pamusoro pemashoko aya inobva kumunhu mumwe chete akabvunza kuumbwa kwegirazi rekhamera mune imwe vhidhiyo yapfuura, uye iguru chairo nekuti haugone kuomarara uye kuva nechinangwa mairi, kusvika pakuongorora girazi reiyo iPhone kamera pasi peiyo elektroni maikorosikopu uye uchiienzanisa neyesafiri girazi reTissot wachi. Kunyangwe kuve muChirungu, zvakakosha nekuti pane nguva shoma kuti YouTuber inotora dambudziko rakawanda kugadzira vhidhiyo yakaoma kudaro. Mariri tinogona zvakare kuwana mhinduro kune zvese izvi zvakashata nezvesafire uye nei ichikwenya painenge isingafanire. Tsananguro iri nyore: haina kukwenya, inotsemuka. Kunyangwe zvinganzwika zvakafanana, hachisi chokwadi. Iyo yegirazi girazi haina kukora zvakakwana kuti ikwanise kumira kumanikidza kunoitwa panguva yekuyedzwa, uye kunyangwe pakutanga pekutaridzika kunoita sekukwizwa ne6 hardness punch (haifanire kana iri yesafiri), chokwadi ndechekuti kumanikidza kunoita izvo girazi rakatsemuka, kwete kukwenya, sezvinoonekwa pasi pe microscope.
Apple yechikamu chayo haina kuzeza kuratidza kuti iyo kristaro zvechokwadi isafire, sezvakaita Phill Schiller pachake mazuva mashoma apfuura pa Twitter, kuomerera kuti bvunzo dzakadai dzinofanirwa kuitwa mumusangano wevarabhorani zvakateedzana chaizvo zvinodiwa kuti zvive zvinoshanda.. Kufananidza girazi rewachi negirazi rekamera mbozha hakuna kunaka, nekuti ukobvu hwemakristasi ese hwakasiyana zvakanyanya uye nekudaro kumanikidza kwavanotsigira kusvikira vatsemuka hakuna kufanana. Zvinotaridza sekunge chakavanzika chagadziriswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 kamera girazi isafiri
Ini handina basa kana rakagadzirwa nesimbi, dhayamondi kana goridhe safaya, chandisingade ndechekuti € 900 chishandiso chigezwe nechibhakera
App Ads Rova iyo App Chitoro
Numeri uye Kuverenga, mahara kwenguva pfupi